Quotz sonkorta - Dusha sare ee dusha sare waxay u egtahay kiristaalo badan oo sonkor ah - fiidyow
Ka iibso dukaankeena dabiiciga ah
Halbawlaha sonkortu waa dhagax qurxin leh oo leh muuqaal dusha sare leh oo dabiici ah sida kiristaalo sonkorta wanaagsan oo ay sameeyeen dabeecado dabiici ah oo wajiga micro-kirismaska.
Halbawlaha sonkorta ayaa leh taariikh dib-u-noqota sannadihii 10,000, sida loogu tixraacay Paleo-Indian.
Quotada sonkorta lama arag ama wax badan lagama helin tan iyo horraantii 1900s. Wixii natiijo ah ee maanta jira waxaa loo tixgeliyaa inay aad u yar yihiin.
Quartz waa macdanta adag, dhagaxa dhagxaanta ka sameysan oo ka kooban silicon iyo atom oksijiin ah. Atamku wuxuu ku xiran yahay qaab isdaba joog ah ee SiO4 silicon – oxygen tetrahedra, iyadoo oksijiin kasta la wadaagayo inta u dhexeysa laba tetrahedra, isagoo siinaya qaaciddada kiimikada guud ee SiO2. Quartz ayaa ah macdanta labaad ee ugu badan dunida qaaradaha, oo ka dambeysa feldspar.
Waxaa jira noocyo badan oo kala jaad ah, kuwaa oo qaarkood ay yihiin dhagaxyo qaali ah oo qaali ah. Tan iyo qarniyadii hore, noocyo kala duwan oo rubuc ah ayaa ah kuwa ugu caansan macdanta inta badan laga sameeyo samaynta dahabka iyo dhagaxyada dhagaxa adag, gaar ahaan Eurasia.
Quartz wuxuu ka tirsan yahay nidaamka kicinta loo yaqaan 'trigonal system system'. Qaabka buluuga ah ee ugufiican ayaa ah leydi lix-dhinac leh oo leh alwaax lix-dhinac leh dhamaadka kasta. Kirisaska dabiiciga ah 'quartzals' badanaa waa mataano, oo leh mataano dhanka midig iyo bidix-bidix rubucyo, kala-yaac ah, ama sidaas oo kale isugu jira kiristaalo ku dhegan 'quartz ama macdanno kale' oo kaliya si ay u muujiyaan qayb ka mid ah qaabkan, ama iyada oo aan weji lahayn wajiyo muuqata oo gebi ahaanba iyo u muuqda mid weyn. Kiristaalo si fiican loo sameeyay ayaa sida caadiga ah ku samaysan 'sariir' oo leh koritaan aan la xakamayn karin oo madhan; badanaa kiristaaloku waxay ku lifaaqan yihiin dhamaadka kale matrix waxaana jira hal kaliya oo ah joojinta joojinta. Si kastaba ha noqotee, sida laba-laabma ee kiristaalo loo joojiyo waxay ku dhacaan halka ay si xor ah ugu koraan iyada oo aan lala xiriirin, tusaale ahaan gudaha gypsum. Gundhigga '' quartz geode 'waa xaalad caynkaas ah oo meesha wax ka bannaan ay tahay qiyaas ahaan qaabdhismeedka qaab ahaan, oo lagu goglay sariir kirismas oo gudaha ku tusinaya.
In kasta oo qaar badan oo ka mid ah magacyada soo jireenka ahi taariikh ahaan ka soo if baxeen midabka macdanta, haddana magacyada hadda sayniska ee saynisku waxaay tixraac u yihiin kaabayaasha macdanta. Midabku waa aqoonsiga labaad ee macdanta "cryptocrystalline", in kasta oo ay tahay astaan ​​aasaasi u ah noocyada macrocrystalline.
Quotor sonkor ah Fluorite ka Madagascar